Qorshaha Dugsiga Hoose (K-5) | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Akhris-qorista qarniga 21-aad waxay macnaheedu noqon doontaa awoodda lagu heli karo macluumaadka, loo caddeyn karo, loo qiimeyn karo, loo abaabuli karo maktabado dijital ah oo shaqsiyadeed iyo in la helo habab macno leh oo lala wadaago kuwa kale. Macluumaadku waa shey ceyriin ah - ardaydu waxay u baahan doonaan inay bartaan inay wax ku dhistaan. Adduunku waa Flat oo waxaa qoray Thomas L. Friedman
Markaan ku dadaalno inaan u diyaarinno ardaydeena qarniga 21-aad oo aan u ballan qaadno waxqabad muuqda, waxaan si isdaba joog ah u xusuusineynaa in heerka sare ee aqris-qorista uusan ahayn raaxo, laakiin uu yahay baahi aasaasi ah. Ardaydeena waxaa lagu cabirayaa awooda ay u leeyihiin wax aqrinta, qorista, ku hadlida iyo dhageysiga, Degmadeena waxaa lagu qeexi doonaa guusha aan ka gaarnay diyaarinta ardayda si ay si hufan uga qayb qaataan howlahaan. Hadafkeenu waa in Qorshaha Akhriska iyo Qoraalka ee Maxalliga ahi uu bixin doono qaabdhismeedka lagama maarmaanka u ah taageerada safarkayaga.
Dhisida qorshe ku saabsan barashada aqriska iyo qorista waxay jawaab u tahay baahiyaha degdegga ah ee ardayda iyo dardaaranka hay'adahayada maamulka. Waxaa waajib nagu ah inaan ka jawaabno wicitaanka MN Statue 120B.12, Si Fiican Akhri Fasalka Saddexaad . Sharcigani wuxuu nagu hagayay inaan ka fikirno abuurista qorshe xaqiijinaya guusha ardayda sanadaha aasaasiga ah ee waxbarashadooda.
Intaas waxaa sii dheer iyadoo la qaatay heerarka tacliinta ee Minnesota, barashada akhriska iyo qorista waxay noqotay mas'uuliyad wadaag ah iyadoo la qeexaayo. Hadafkeenna iyo tallaabooyinkeennu waa kuwo horay loo sii cayimay, tallaabo kasta oo hore loo qaadayna waxaannu hubin doonnaa inay ardaydeennu dareemayaan inay diyaar yihiin oo ay ku kalsoon yihiin awooddooda.
Nasiib wanaagse, qaabeynta iyo hirgelinta Qorsheheenna Akhris-qorista Degmooyinka waxaa taageeray dhaqan ay ka go'an tahay heer sare. Ardaydeena, shaqaalaheena iyo bulsho weynta ayaa u heellan hal-abuurnimo iyo iskaashi.
Waxqabadka ardayga Minnetonka durba waa mid la yaab leh oo macallimiin khibrad leh ayaa hoggaamiya asxaabtooda waxayna fududeeyaan barashada mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeenna. Laga soo bilaabo mabda'a alifbeetada illaa Meelaynta Horukacsan, waxaan ka haynaa barxad sare oo aan ka bilaabayno qorshahan Akhriska iyo Qoraalka Maxalliga ah.
Qorshaha Akhriska iyo Qoraalka 2019-20